lundi, 16 novembre 2020 22:18
Alaviro ireo namana manana fijery mihiba
Io saintsika io dia miasa tsy baikoina, na matory aza ianao dia miasa foana izy io.
Raha misy tanjona tianao ho tratra, dia eritrereto iny tanjona iny, raiso an-tsaina tsirairay ny fomba anatratraranao azy.
Esory an-tsaina ilay eritreritra mihiba, satria voatanan'ny saina iny, ka dia ho amafisiny hatrany iny mihiba iny, ka hitarika hakiviana ho anao.
Raha mijery mihabo ianao dia hijery mihabo ihany koa io sainao io, ka hibaiko ny vatanao rehetra ho mihabo sy atanjaka anatanterahinao ny tanjonao.
Azo atao ny manisy sary ho peta-drindrina ao antranonao ho hitan'ny masonao hatrany ny tanjonao, ohatra Plan trano, na modely fiara, na tracteur, na fambolena.
Alaviro ireo namana tsy sasatry ny manakivy sy mijery mihiba, tsy izy no resenao lahatra amin'ny tanjona tianao tratrarina fa ny sainao miasa mangina izay manira-tena mihiba na mihabo arakaraky ny baiko omenao azy.
lundi, 16 novembre 2020 19:45
Tetezam-by Tanjombato : Tsy ho azo ampiasaina mandritra ny telo andro
Hasiam-panamboarana ilay tetezam-by eo Tanjombato, mandika an'Ikopa.
Ho tapaka io tetezana io manomboka rahampitso 17 novambra 2020 manomboka amin'ny 05 ora maraina ka hatramin'ny 19 novambra 2020.
Ho azo ifanenana ilay tetezana "béton" etsy amin'ny ilany.
Hisy lamina hapetraky ny mpitandro ny filaminana sy ny Kaominina Tanjombato handrindrana antsakany sy andavany ny fifamoivoizana eny an-toerana.
Ny tsara dia mamonjy ny By Pass ireo fiara vaventy.
lundi, 16 novembre 2020 14:38
Lalana RN33 Bis : Miantso vonjy ny vahoakan’Ambatoboeny
Tapaka sahady ny RN33 Bis, taorian’ny orana in-droa nilatsaka ny herinandro lasa iny. Vao miandoha anefa ity ny fahavaratra dia fijaliana no iainan’ny vahoakan’Ambatoboeny, amin’ny lalana.
Eo amin’ny PK 12 Soaniaviana no mikatso ny fiara.
Ny takaitra navelan’ny ranobe teo aloha mbola eny, ary vao mainka aza potika.
Tsiahivina fa nampanantena ary nilaza imasom-bahoaka ny tsy maintsy hanamboarana an’io lalana Ambatoboeny-Andranofasika io, ny Praiminisitra Ntsay Christian raha tonga tao Ambatoboeny niaraka tamin’ireo delegasiona mafonja, ny 25 martsa 2019.
Miandry ny fanatanterahana izany ny vahoaka aty an-toerana, izay mahatsiaro mijaly noho io faharatsian-dalana io, satria tena miantraika amin’ny toe-karena sy sosialin’ny mponina ary koa ny fandriampahalemana.
Maro ny antony mety te hiasana tena. Ao ny mitady asa nefa tsy mety mahita, ao kosa no manana finiavana te ahaleo tena hanao ny fitadiavany manokana, ao no te hanangana ny orinasany.
Tsy mora ny manangana orinasa, ary hisahana mpiasa maro rehefa avy eo. Mila jerena dieny mialoha ny ara-pahasalamana. Tsy voatery ho olona matanjaka akory, na hoe raha misy aretina mitaiza dia tsy ho afaka anana ny orinasan'ny tena, fa fantaro mialoha ny toe-pahasalamana.
Mety hiasa saina betsaka, mety hanao asa vatana ary hisy stress betsaka, mety tsy ho ampy toro-maso, tara sakafo, tsy hanana congé sy week-end. Mety hiakatra tosi-drà mihitsy.
Mila alamina izany io resaka fahasalamana io, mba tsy hiantraika amin'ny toe-batana ny asa atao.
lundi, 16 novembre 2020 07:58
Semaine mondiale de l'entrepreneur:
La troisième semaine de novembre qui est retenue pour cette manifestation.
lundi, 16 novembre 2020 07:49
16 novembre : Journée Internationale de la tolérance.